Ahmiyada Wadashaqeyntu U Leedahay Suuqleyda Qufulka Ka Jooga | Martech Zone
Muhiimadda Wada shaqaynta Suuqleyda ee Qufulka
Talaado, Oktoobar 27, 2020 Talaado, Oktoobar 27, 2020 Tunio Zafer
Daraasad ku saabsan suuqleyda iyo agaasimayaasha guud ee xagaaga ayaa lagu ogaaday in boqolkiiba shan kaliya aysan helin wax wanaag ah nolosha qufulka - qofna ma oran inuu ku guuldareystay inuu wax barto mudadaas.
Oo leh garasho kor-u-kac dalabka waxqabadka suuq geynta ka dib, sidoo kale waa sidoo kale.
Waayo, xPlora, wakaalad suuqgeyn iyo dijitaal ah oo fadhigeedu yahay Sofia, Bulgaria, awoodda in lala wadaago faylasha naqshadeynta iyo hantida kale ee muuqaalka leh shaqaalaha iyo rajada ayaa noqotay mid muhiim ah.
Ahaanshaha wakaalad dijitaal ah, amni ah, iyo 24/7 helitaanka hantida muuqaalka ayaa fure u ah kooxdayada. pCloud waxay si buuxda u hogaansan tahay shuruudaha amniga ee aan hirgelinay si aan u buuxino shuruudaha macaamiisheena maxaliga ah iyo kuwa caalamiga ah.
Georgi Malchev, xPlora Maareeyaha Iskaashatada
Kooxda xPlora hadda wey isticmaalaan pCloud, oo ah mid ka mid ah kaydinta daruuraha sida ugu dhakhsaha badan u koraya ee Yurub iyo dhufto-wadaagga faylalka. Macaamiisha caalamiga ah, qufulku wuxuu keenay caqabad gaar ah.
Laakiin sidee ayey tahay in kooxaha suuqgeyntu u wadaagaan feylal muhiim ah - oo badiyaaaba waaweyn - si ay ugu shaqeeyaan ugu badnaan adduunka ay Covid-19 sii waddo burburka? Waxaa jira seddex sharci oo dahabi ah si loo ilaaliyo sii socoshada ganacsiga inta laqabanaayo shaqooyinka fog iyo kuwa isku dhafan:
Ku xirnaanshaha iyo wada shaqeynta asxaabta guriga ka mid ah waxay noqon kartaa wax adag, oo waxyaabaha mar fudud sida tusida midba midka kale dukumiintiyada shaqada, waxay noqotay howl aad u dhib badan. Awoodda inaad si wada jir ah uga shaqeyso dukumiintiyada, muuqaalada iyo feylasha maqalka sida ugu fudud ee aad uga shaqeyn karto jawiga xafiiska ayaa fure u ah guusha.
Qiyaastii 60% dadweynaha Ingiriiska waxay ka shaqeynayeen guryaha tan iyo markii la xiray coronavirus, iyadoo 26% ay go'aansadeen inay ka sii shaqeeyaan guriga mararka qaarkood, mar ay badbaado u tahay inay sidaas sameeyaan. Xitaa marka ay caadi soo celiso, waxaa weli jiri doona baahi loo qabo in lala xiriiro asxaabta aan xafiiska si joogto ah u joogin oo go aansada in mararka qaar ay ka shaqeeyaan guriga. Waxay noqotay mid lama huraan ah in la helo qalab wada shaqeyn oo sax ah oo qof walba uu iska haysto.
Focus on Amniga Faylka
Waa muhiim waqtiyada aan la hubin in qof walba dareemo dareemo nabadgelyo marka laga shaqeynayo dukumiintiyada. Tan waxaa ka mid ah in macaamiisha la siiyo kalsooni iyo sidoo kale shaqaalaha. Kaliya amniga darajada militariga ayaa ogolaanaya nabada dhabta ah ee maskaxda iyo kalsoonida, sidaas darteed waa muhiim in milkiilayaasha ganacsiga iyo kuwa saaran teknoolojiyada cusub ay qabtaan shaqadooda guriga. At pCloud, waxaan rabnay inaan sidoo kale horey u sii qaadno oo aan u oggolaanno dadka isticmaala inay go'aansadaan haddii ay jeclaan lahaayeen inay ku keydsadaan macluumaadkooda gudaha Yurub ama Mareykanka, taas oo u oggolaanaysa inay ku habboonaan karaan halka faylalka ay ku keydsan yihiin iyadoo ku xiran dookha shaqsiyeed.
Si sahlan loo Isticmaalo
Fududeynta isticmaalka ayaa laga yaabaa inay tahay baahida ugu weyn ee loo qabo bixiyeyaasha kaydinta daruuraha. Waxay ganacsatadu u baahnayn waa nidaam kale oo isku murgan oo nidaamyo iyo geeddi-socodyo ah oo lagu barto. Xalka ku habboon dhammaan xirfadaha waa muhiim muhiim ah.
Waxaa la saadaalinayaa in dhamaadka sanadka 2020, 83% culeyska shaqada wuxuu kujiraa daruurta, Kaliya muujinta muhiimada ay leedahay isku xirnaanta marka la wadaagayo fikradaha iyo horumarinta istiraatiijiyad suuq geyn, iyo abuuritaanka jawi shaqo oo iskaashi leh. Wakaaladaha suuq-geynta, Covid-19 waxay siisay fursad ay ku hesho nidaamyo iyo habab sax ah oo lagula kulmo 'mustaqbalka shaqada'. Waa fursad aysan awoodin inay seegaan.
Tags: file sharingiskaashiga suuq geyntapcloudiskaashi fogshaqo fogshaqada fog
Tunio Zafer waa maamulaha guud pCloud AG - shirkadda horumarisa oo bixisa madal kaydinta pCloud. Waxa uu leeyahay in ka badan 18 sano oo khibrad maamul iyo suuqgeyn ah oo ku saabsan tiknoolajiyadda, wuxuuna ka qaybqaatay tiro mashaariic ganacsi oo guul leh sida MTelekom, Host.bg, Grabo.bg, Mobile Innovations JSC iyo kuwo kale. Hogaamiye ahaan iyo maareeyaha shirkadda kaydinta daruuraha, Tunio waxay kor u qaadaa hal-abuurka meelaha sida amniga iyo waxtarka-qiimaynta isticmaaleyaasha. Tunio waxa uu dhiirri-geliyaa ka-fikirka hore ee kooxdiisa oo dhan, isaga oo ka shaqaynaya sidii uu saamayn weyn ugu yeelan lahaa suuqa IT-ga ee sida xawliga ah u koraya, shakhsiyaadka iyo ganacsigaba.
Isku xirka Audiense: Barmaamijka Suuqgeynta Twitter ee ugu horumarsan ee ganacsiga
Abstract: Iskaashi, Nooc, iyo Handoff Naqshadeynta Alaabtaada